Ireo mpilalao mozika 11 tsara indrindra ho an'ny Windows 10 | Vaovao momba ny gadget
Ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Windows
Na eo aza ny zava-misy fa ny serivisy fitaterana mozika no lasa fitaovana be mpampiasa indrindra raha ny amin'ny fihainoana ny mozika ankafiziny no betsaka, dia ireo izay manana hira be dia be, niova fo mivantana tamin'ny CD-nao tamina kalitao avo indrindra ary aleon'izy ireo mampiasa ny PC hitantanana azy amin'ny fotoana rehetra, ankoatry ny filalaovana azy mifandray amin'ny fitaovana audio.
Raha te hanohy hanararaotra ny fitehirizam-bokinao ianao, ilay trano famakiam-boky izay nandanianao vola efa an-taonany maro hamoronana, amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao hoe iza izy ireo ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny WindowsIreo mpilalao izay manavao hatrany hatrany isan-taona, fa tsy ireo nanjary angano nefa tsy nohavaozina nandritra ny taona maro.
Amin'ireo mpilalao rehetra asehonay anao eto ambany, daholo Manolotra kinova maimaimpoana izahay miaraka amina fetra hafa, famerana azontsika atao ny miala amin'ny fividianana ny rindranasa, saingy izy ireo no kely indrindra. Ankehitriny ny zava-drehetra dia miankina amin'ny filàna sy ny safidinao izay hitazomana ny tranombokinao amin'ny filaharana sy ny kaonseritra.
2 Waf Music Manager
10 Mpilalao media VLC
Ity mpilalao mandany loharanom-bola ity dia tsy mamela antsika hankafy ny mozika ankafizintsika fotsiny, fa mamela antsika hilalao karazana video, anisan'izany ireo voarakitra ao amin'ny 360 degre, na izany aza mila misintona ireo kaody mifandraika amin'izany ianao, zavatra tsy mitranga raha miresaka rakitra mozika isika. GOM Player dia manolotra hoditra be dia be antsika hanamboarana ny mpilalao mba hifanaraka amin'ny zavatra tiantsika, fiasa izay tsy ny mpilalao rehetra eny amin'ny tsena no manolotra.
Raha eo am-pihainoana mozika isika dia mihodina manodidina ny trano, noho ny fampiharana GOM Remote dia afaka manao izany isika fehezo ny playback amin'ny finday avo lenta, na Android na iOS, hahafahantsika mijanona ny filalaovana, mandroso ilay hira, miverina ... Mila fahatsiarovana 2 GM RAM ary mifanaraka amin'ny Windows XP ka hatrany amin'ny Windows 10. Manolotra hoditra maro be koa izy io hanamboarana ny hatsaran-tarehin'ny mpilalao.
Sintomy ny mpilalao GOM
Waf Music Manager dia fampiharana tsotra sy azo ampiharina izay vondrona a mpilalao mozika, mpikarakara hira ary tonian-dahatsoratraao anaty fonosana maivana iray, mamela anao hihaino mozika ary hanova ny antsipirian'ny hira amin'ny toerana iray. Ny mpizaha rakitra an-tsokosoko dia ahafahanao mijery ireo rakitra mozika rehetra ao anaty toerana manokana ao amin'ny solosainao sy ny faharetany, raha toa kosa ny fiasa fikarohana dia azo ampiasaina hanivanana ireo hira amin'ny anaran'ny mpanakanto, lohateny na rakikira.
Ny fampiharana dia ahafahanao manova ny angon-drakitra momba ny rakitra mozika voafantina (avela ny fiasan'ny andiany), manome saha azo ovaina ho an'ny mpanakanto, lohatenin-kira, rakikira, naoty, isa ny track, ny taona, ny karazana, ny mpanonta, ny mpamoron-kira ary ny mpitantana. Amin'izany no ahafahanao mandamina ny fanangonanao amin'ny fomba mahomby kokoa. Wal Music Manager dia tohanan'ny Windows 8.1.
Sintomy Waf Music Manager
ZPlayer dia mpilalao mozika monina ao Java izay ahafahantsika mankafy ny mozika ankafizinay amin'ny rindrambaiko mora ampiasaina tsy misy fahasarotana. Ity mpilalao ity dia manohana amin'ny endriny maro ny endrika audio toa ny MP2, MP3, WAV, Ogg, Flac, MID, CDA, MOD, Dolby AC3 ... Afaka mamorona playlist mora foana izahay izay mampiseho amintsika ny anaran'ny hira, ny faharetany, ny habeny ary rehefa noforonina izy io. ZPlayer dia mpilalao mifanaraka amin'ny kinova Windows rehetra, mamela antsika hilalao feo fotsiny izy io, kely dia kely ny toerana misy azy ary mamela ny fiatoana na mitendry ilay hira ny mpampiasa interface, ajanony, alefaso ny hira na hiverina amin'ilay taloha.
Sintomy ny ZPlayer
Ny AIMP dia manatevin-daharana ny lisitry ny mpilalao mozika azo ampiasaina amin'ny Windows. Ny endri-javatra lehibe atolotray antsika dia ny mifanentana amin'ny hoditra samihafa hanamboarana ny mpilalao araka izay tiantsika. Ny AIMP dia mifanaraka amin'ny MP3, AAC, FLAC, MAC, M3U, OGG, OPUS, RMI, TTA, WAV ary WMA ary ireo rakitra hafa ankoatry ny hafa. Ity mpilalao ity mila toerana kely dia kely amin'ny kapila mafy ataontsika ary mifanaraka amin'ny Windows Vista izy io.
Sintomy ny AIMP
MusicBee dia iray amin'ireo mpilalao manome safidy malalaka kokoa antsika amin'ny toerana kely kokoa. Raha tokony manolotra mpizaha rakitra ho antsika izahay dia tsy maintsy manafatra mivantana ilay lahatahiry izay hanombohana ny fisie mozika. Raha eo amin'ny metadata an'ireo rakitra audio, dia ampidirina ny rakikira na ny kanto hira, ity dia haseho amin'ny fampiharana. MusicBee dia manome antsika fomba fampisehoana samihafa, fanakatonana mandeha ho azy, ovay ny fanamafisam-peo, fidirana amin'ny mixerna hira, ovao ny mari-pamantarana ireo rakitra audio ... Ity playback ity dia mifanaraka amin'ny Windows Vista ary mifanaraka amin'ireo kinova 64 bit.
Iray amin'ireo mpilalao manome safidy malalaka ho antsika ny MediaMonkey, playback afaka mitantana trano famakiam-boky tsy mikorontana mihoatra ny 100.000 XNUMX fisie, mandoro CD mivantana avy amin'ilay application, mikaroha amin'ny alàlan'ny tag, litera, fonony ary metadata hafa, tantano ny karazan-kira karazana ...
Izy io koa dia ahafahantsika milalao endrika audio tsy misy atahorana ny hiova endrika hafa, afaka mamorona playlists ny hira rehetra tadiavintsika tsy misy fetra ankoatry ny fampiasana ny fiasan'ny Auto DJ ka mikarakara azy ho azy ny fitendrena ireo hira ao amin'ny fitahirizam-bokintsika. Ao anatin'ny safidy manokana dia ahitantsika koa ny manampy hoditra, fitaovana hahitana mozika vaovao, fonosana fiteny ...
Sintomy ny MediaMonkey
Na dia fantatra indrindra amin'ny maha-tonian-dahatsoratry ny rakitra audio azy ity rindrambaiko ity, dia manolotra asa hafa ihany koa izy hampiasa azy io ho toy ny mpilalao mozika, saingy miaraka amin'ny bonus fanampiny izay ahafahantsika manitsy ireo hira tiantsika hamoronana, amin'ny alàlan'ny fades, a lalana tokana miaraka amina hira maro. Naps mitady iray manontoloMba hisorohana ny fisian'ny fampiharana be dia be ao amin'ny solosainao, Audacity no fampiharana ilainao.
Raha tsy hita amin'ny PC-nao fotsiny ny mozikantsika, fa mampiasa serivisy mozika mivantana koa izahay, ny fitantanana ireo vaovao rehetra ireo dia tena tsotra tamin'i Tomahawk, mpilalao maimaim-poana izay azo ampifandraisina amin'ny Google Play Music, Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud hatramin'ny YouTube. Amin'izany fomba izany, ny hira rehetra tadiavintsika dia ho hitantsika mora foana, na amin'ny kapila misy anao na amin'ny iray amin'ireo serivisy mozika mikoriana. Ary koa, raha iray amin'ireo mpampiasa tia mizara ny zavatra tianay amin'ny namantsika izahay dia manolotra fitaovana tonga lafatra an'izany i Tomahawk hanaovana izany.
aTunes, izay aingam-panahy avy amin'ny iTunes an'ny Apple, dia manome antsika interface tsotra sy mazava mba hahafahantsika mahita sy mitendry ireo hira rehetra izay ao anatin'ny fitahirizam-bokintsika. Misaotra ny safidy hanafarana hira na lahatahiry. afaka mitantana tsikelikely ny tranombokintsika isika tsy mila miady amina hira marobe raha vao manomboka.
aTunes dia mifanaraka amin'ny endrika audio rehetra eny an-tsena, noho izany dia tsy mila manova ireo hira amin'ny endrika mifanaraka aminy kokoa isika hahafahantsika mitendry azy ireo, miaraka amin'ity fampiharana maimaimpoana tsara ity. Toy ny serivisy hafa, aTunes dia mamela antsika hifandray amin'ny Last.fm ho fanampin'ny fitadiavana ireo hira rehetra izay averina indroa, zavatra iray izay tena vitsy no manao fampiharana.
Mpilalao media VLC
VLC dia nanjary, nandritra ny taona maro, fitaovana tsara indrindra izay hitantsika amin'izao fotoana izao eny an-tsena maimaimpoana hahafahana mihaino ny mozika ankafizintsika sy mankafy izay horonan-tsary na inona na inona endrika misy, satria mifanaraka amin'ny rehetra izy ireo. Na dia marina aza fa ny estetika dia tsy ny mahavariana indrindra amin'ny rehetra, miaraka amin'ny VLC dia tsy hanana olana amin'izany isika mitendry endrika mozika rehetra.
Ampidino ny VLC
Raha te hanana ny fitahirizam-bokintsika mifanaraka amin'ny fonony tsirairay avy isika, Apple iTunes dia safidy tena tsara rehefa mihaino ny mozika ankafizintsika, eny, mila mitandrina be ianao amin'ny angona rehetra isaky ny hira, mba hahafahan'ny fampiharana manasokajy sy manangona azy ireo tsara. Raha manana iPhone, iPad na iPod Touch ianao, dia azo inoana kokoa fa efa nametraka an'ity rindranasa ity ianao na dia tsy mampiasa afa-tsy ny manao kopia backup fotsiny, satria ilay asa namela anay hitety ny App Store ary hametraka azy ireo taty aoriana tao amin'ny fitaovana iOS anay dia nesorina taorian'ny namoahana ny iOS 11.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Windows
Nintendo hanidy ny Wii Shop amin'ny taona 2019
Navoaka ny sarin'ilay kamio mpitondra herinaratra an'i Tesla